Qorax xoogan oo ka dhacay Nairobi sababayna in ay ku dhaawacmaaan 8 ruux. Dec 6, 2012 (QOL) Waxaa magaalada Nairobi Gaar ahaan xaafada Islii Caawa ka dhacay qarax ay ku dhaawacantahy 8 ruux kuwaas oo uuu ku jiro cunug yar iyo hooyadii, wuxuuna qaraxani ka dhacay goob caafimaad oo kamid ah xaafaada Islii ee ay dadka Somaaliyeed ku badan tahay.
Ciidamada Booliska ayaa daqiiqado kadib isku gadaamey goobtii uu qaruxu ka dhacay, balse goobjooge ku sugnaa meesha qaruxu ka dhacay ayaa sheegey in qaraxan uu ka dhacay goob lagu iibiyo Gas ka.
Tababaraha Booliska Nairobi Moses Ombati oo saxaafada lahadalay ayaa cadeyay in qarax kadhacay Nairobi ay ku dhaawacmeen 8ruux mid kamid ahna dhaawac hali ah soogadhay halka 7kale dhaawacooduu Sahlan yahay.
Qaraxayada ka dhacaya xaafada Islii ayaa baryahan danbe soo badan haya bishii la soo dhaafay ayay aheed markii Qarax lala beegsadey baa-buur Bas ah ay ku dhinteen 9ruux tiro in taasi kabadana ku hwaawacantay.